Ngaba izibalo zePinterest ziyanceda ngokwenene? Follow ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
Meyi 12, 2021 0 IiCententarios 323
Ukuba uneakhawunti yeshishini kwiPinterest, uyazi ukuba kubalulekile ukwazi iindlela zentengiso kunye ukuhamba kwabathengi bakho okanye abathengi abanokubakho ngaphakathi kweqonga. Esi sicelo sinelinye lawona manani agqityiweyo okwazi ukuhamba kwabaxhasi bakho kunye nabathengi abanokwenzeka ngaphakathi kulo. Eyona nto icetyiswayo kukuba ubabonise kwaye ubone ukuba yintoni amandla kunye nobuthathaka beempapasho zakho ngazo.
Into yokuqala kukungena iakhawunti yakho yeshishini yeqonga.
Nje ukuba ungene ngaphakathi, yiya ku kude nezikhonkwane ezenziwe, uyakufumana oku emazantsi egama lakho.
Cofa apha enye yeempapasho oyenzileyo, oku kuya kukubonisa lonke ulwazi olunxulumene nepini yakho.
Cinezela bonisa enye indlela ezinye iinkcukacha-manani.
Zeziphi ezinye iindlela ekunikezela ngazo manani:
Ukuvuza kwedatha: Olu khetho luya kukuvumela ukuba wazi ukugcwala kwabantu abatyelele izikhonkwane zakho, oku kungenziwa ixesha, iveki, iiveki ezimbini, inyanga, kuxhomekeke kwimfuno yakho yokwazi le datha. Ayisiyiyo enye indlela onokwazi ngayo idatha ngexesha, unokwazi nendlela ezihamba ngayo iindwendwe zakho ngokomxholo.
Grafu ulwazi: Ukuba ungomnye wabo bantu baziqonda ngcono izinto ezivela kwigrafu, le yeyona ndlela ilungileyo yokuthenga ngale ndlela ukuqesha abatyeleli kwiphepha lakho kunye neempapasho zakho ngokweendlela ofuna ukuzazi, iiyure zokundwendwela, uninzi lwazo umxholo, ngokufutshane, yonke into edityaniswa neakhawunti yakho kunye nokupapashwa kwakho.
Ukuthelekiswa kwemizobo: Uyakwazi ukuthelekisa ezinye iigrafu kunye nezinye, ngokolwazi ofuna ukuluthelekisa ukufumana iimpendulo ozifunayo, uya kuba nakho ukuthelekisa igrafu yomxholo, kunye negrafu yomthombo, kunye negrafu yohlobo lwezixhobo ezisuka abangena kwiphepha.
Phendula amagqabantshintshi: Olu khetho luya kukuvumela ukuba wazi uluvo lweendwendwe, abathengi kunye nabathengi abanokubakho malunga nezikhonkwane zakho okanye / kunye neemveliso zakho, oku kubalulekile, kuba ukusuka apho uya kugqiba ukomelela kunye nobuthathaka bohlobo lwakho, iimveliso zakho okanye upapasho lwakho.
Iimbono zedashboard: Olu khetho luya kukuvumela ukuba wazi ukuba zeziphi iimveliso okanye iimpapasho ezitsala umdla wabathengi abakutyelelayo, eziza kukuxelela ukuba zeziphi iibhodi eziphumelele ngakumbi kwaye ukuba uhlalutya umxholo wazo, uya kuba nakho ukwazi ukuba wenzeni ukuze ezinye iiplanga zakho ziphumelele njengale.
Iindidi zezikhonkwane okanye intengiso oyenzayo kwiphepha: Oku kuya kukuxelela ukuba zeziphi iindlela zentengiso ezona zifunyenwe zijolise kubathengi ojonge ukutsala umdla kubo, oku kunomdla wokwazi kuba amaxesha amaninzi sifumanisa isimilo sabathengi bethu ngendlela engaqhelekanga.
Jonga iinkcukacha-manani rhoqoIzikhonkwane ozipapashayo, ukuze wazi ukuba zeziphi ezahlukileyo kunye neziphumo zotshintsho olwenzileyo kwiakhawunti.
2 Zeziphi ezinye iindlela ekunikezela ngazo manani: